Ny angano an'i Apollo | Fitsangatsanganana tanteraka
Isabel | | Gresy
Ny iray amin'ireo angano lehibe indrindra amin'ny tontolon'ny kilasika dia ny an'i Apollo, izay nifampiraharaha tamina andriamanitra mpiady izay mpanakanto tamin'izany fotoana izany satria niaraka tamin'ny mozika izy taloha ary mpiaro tononkalo sy mozika lehibe. Izy dia iray amin'ireo andriamanitra hajaina indrindra any Gresy taloha ary iray amin'ireo andriamanitra rehetra.
Raha maniry ny angano grika ianao dia aza hadino ity lahatsoratra manaraka ity izay hanontanianay ny momba an'i Phoebus (ahoana no nahalalan'ny Romana an'io andriamanitra io), ny maha-zava-dehibe ny angano Apollo, ny niandohany, ny asany ary ny fianakaviany, ankoatry ny olana hafa.
1 Iza i Apollo?
2 Ahoana ny fisolo tena an'i Apollo?
3 Inona avy ireo fanomezana an'ny andriamanitra Apollo?
3.1 Apollo sy clairvoyance
3.2 Apollo sy ny oraketa
3.3 Apollo sy ny ady Trojan
4 Ny fianakavian'i Apollo
Iza i Apollo?
Araka ny angano grika, Apollo dia zanakalahin'i Zeus, andriamanitra matanjaka indrindra any Olympus, ary Leto, zanakavavin'ny titan iray izay notompoina ho andriamanibavy alina sy antoandro nifandimby.
Zeus dia liana tamin'ny Asteria tamin'ny voalohany, izay rahavavin'i Leto, ary nanandrana naka azy an-keriny. Na izany aza, nahavita nandositra izy ka nivadika papelika fa rehefa nanenjika azy hatrany io Andriamanitra io dia nilatsaka tao anaty ranomasina izy ary lasa nosy Ortigia.
Tsy nahatratra ny tanjony, dia nibanjina an'i Leto izay nibebaka i Zeus ary avy tamin'io fifandraisana io dia bevohoka tamin'i Apollo sy i Artemis kambana. Na izany aza, ny vadin'i Zeus, ara-dalàna, Hera, rehefa nahalala ny zava-niainan'ny vadiny, dia nanomboka fanenjehana mahatsiravina tamin'i Leto hany ka nitady ny fanampian'ny zanany vavy Eileithyia, andriamanibavy nahaterahana izy, mba hisorohana ny fahaterahan'ny titanid.
Noho io antony io dia, araka ny angano, i Leto dia nijaly nandritra ny sivy andro, saingy noho ny fidiran'ny andriamanitra sasany izay nangoraka an'i Leto, dia navela ny fahaterahan'i Artemis ary tonga olon-dehibe ho an'ny reniny reniny izy. tamin'ny fanateran'ny rahalahiny Apollo. Ary dia nitranga izany. Na izany aza dia talanjona tamin'ny fijalian'ny reniny i Artemis ka nanapa-kevitra ny hijanona ho virijina mandrakizay izy.
Saingy tsy nijanona teo ny zava-nitranga. Tsy nahatratra ny tanjony dia nanandrana nanala an'i Leto sy ny zanany indray i Hera tamin'ny fandefasana python hamono azy ireo. Averina indray, nangoraka ireo andriamanitra Leto ireo andriamanitra ary nampitombo an'i Apollo tao anatin'ny efa-andro monja mba hamonoana ilay dragona tamin'ny zana-tsipika arivo.
Koa satria bibilava bibilava ilay bibilava, dia tsy maintsy nanao sazy i Apollo noho ny namonoany azy ary teo amin'izay nianjeran'ilay python, dia natsangana ny Oracle of Delphi. Ny zanakalahin'i Zeosy dia nanjary mpiaro an'ity toerana ity, mba hibitsibitsika ny faminaniana any an-tsofin'ireo mpisikidy na pythias.
Saingy tsy nifarana teto ny fandrafiana an'i Hera sy Leto fa ny angano an'i Apollo dia mitantara fa samy hijanona ho mpiaro ny renin'izy ireo mandrakizay izy sy i Artera satria tsy nijanona nampijaly azy mihitsy i Hera. Ohatra, araka ny angano grika, novonoin'ireo kambana ireo zanakalahin'i Níobe 14, izay naneso ny titan tsy mahomby, sy ilay goavambe Titius, izay te-hanery azy.
Ahoana ny fisolo tena an'i Apollo?
Natahotra an'ireo andriamanitra hafa izy ary ny ray aman-dreniny ihany no afaka nitana azy. Izy dia misolotena toy ny tovolahy tsara tarehy sy tsy misy volombava izay voaravaka fehiloha laurel ny lohany ary eo am-pelatanany no mitazona ny sitrany na ny lokanga nomen'i Hermes azy. amin'ny alàlan'ny fialantsiny noho ny fangalarana ny ampahan'ny ombin'i Apollo. Rehefa nanomboka nitendry zavamaneno izy, dia gaga ny zanakalahin'i Zeus noho izy mpankafy mozika be ary lasa mpinamana be ry zareo.
Solontenan'ny kalesy volamena an'ny Masoandro koa i Apollo izay nitaingina soavaly efatra tsara tarehy hiampita ny lanitra. Noho io antony io, dia heverina ho andriamanitry ny mazava ihany koa izy, ary i Helios dia andriamanitry ny Masoandro. Saingy, amin'ny vanim-potoana manan-tantara roa, ireo andriamanitra roa ireo dia fantatra amin'ny Apollo iray.
Inona avy ireo fanomezana an'ny andriamanitra Apollo?
Matetika i Apollo dia faritana ho andriamanitry ny kanto, mozika ary tononkalo.
Fanatanjahan-tena koa, ny tsipìka sy zana-tsipìka.
Izy dia andriamanitry ny fahafatesana tampoka, aretina ary areti-mandringana, fa andriamanitra fanasitranana sy fiarovana amin'ny hery ratsy koa.
Apollo dia fantatra amin'ny fahazavan'ny fahamarinana, ny antony, ny tonga lafatra ary ny firindrana.
Izy no mpiaro ny mpiandry ondry sy andian’ondry, tantsambo ary mpandefa zana-tsipìka.
Apollo sy clairvoyance
Araka ny angano an'i Apollo, io andriamanitra io dia nanana fahefana hampita ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny hafa ary izany no nitranga tamin'i Cassandra, ny pretra sy ny zanakavavin'i Priam King of Troy, izay nomeny ny fanomezana faminaniana ho takalon'ny fihaonana ara-nofo. Na izany aza, rehefa nanaiky ity mpampianatra ity izy dia nandà ny fitiavan'andriamanitra ilay tovovavy ary nahatsiaro ho saro-kenatra izy ary nanozona azy, ka tsy nisy nino mihitsy ny faminaniany.
Izany no antony nanirian'i Cassandra hampitandrina ny amin'ny fianjeran'i Troy, dia tsy noheverina ho matotra ireo forecasts nataony ary potika ny tanàna.
Apollo sy ny oraketa
Raha ny angano klasika dia nanana fanomezam-pahasoavana koa i Apollo, izay nanambara tamin'ny olombelona ny baikon'ny lahatra. ary ny fiteniny tao Delphi (toerana namonoany ilay bibilava Python) dia zava-dehibe tamin'ny Grika rehetra. Ny Oracle of Delphi dia teo amin'ny foibem-pinoana teo am-pototry ny Tendrombohitra Parnassus ary ny Grika dia nankany amin'ny tempolin'andriamanitra Apollo mba hianatra momba ny hoaviny avy amin'ny vavan'ny Pythia, pretra izay nifandray mivantana tamin'io andriamanitra io.
Apollo sy ny ady Trojan
Ny angano an'i Apollo dia milaza fa i Poseidon, andriamanitry ny ranomasina, dia naniraka azy hanangana ny rindrina manodidina ny tanànan'i Troy mba hiarovana azy amin'ny fahavalo. Rehefa tsy te hanome ny fankasitrahan'ireo andriamanitra ireo ny mpanjakan'i Troy dia namaly faty i Apollo tamin'ny fandefasana areti-mandringana ho an'ny tanàna.
Taty aoriana dia niditra an-tsehatra tamin'ny Ady Trojan i Apollo na dia teo aza ny zava-misy fa nangataka ireo andriamanitra i Zeus tamin'ny voalohany mba tsy handray anjara amin'ny ady. Na izany aza, niafara tamin'ny fandraisana anjara tamin'izany izy ireo. Ohatra, i Apollo sy i Aphrodite dia nandresy lahatra an'i Ares hiady amin'ny ankolafy Trojan satria ny roa tamin'ireo zanakalahin'i Apollo, Hector sy Troilus, dia ao amin'ny ankolafy Trojan.
Ankoatra izany, Nanampy an'i Paris hamono an'i Achilles i Apollo, satria izy no nitarika ny zana-tsipiky ny andriana Trojan ho amin'ilay hany toerana malemy an'ilay maherifo grika: ny ombelahin-tongony. Namonjy an'i Aeneas tamin'ny fahafatesan'i Diomedes koa izy.
Ny fianakavian'i Apollo
Apollo dia nanana vady aman-janaka maro. Amin'ny maha andriamanitra hatsaran-tarehy azy dia samy nanana lehilahy sy vehivavy tia izy.
Ireo lehilahy tia azy dia:
Etsy ankilany, nanana mpiara-miasa vehivavy marobe izy izay niterahany.
Niaraka tamin'i Muse Talía izy dia nanana ny Coribantes
Miaraka amin'i Dríope mankany Anfiso
Izy dia naterak'i Creusa
Niaraka tamin'i Deyone izy dia niteraka an'i Mileto
Miaraka amin'i Coronis mankany Asclepius
Izy dia niteraka an'i Areisteo niaraka tamin'ny nymph Cyrene
Niaraka tamin'i Ftía izy dia niteraka an'i Doro
Niaraka tamin'i Qione izy dia nanana an'i Filamón
Niaraka tamin'i Psámate izy niteraka an'i Lino
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ny angano an'i Apollo
Ny fahafantarana ny fomba fifampiarahaban'ny aostralianina